I-China i-100% yomqhaphu omfutshane womkhono wamadoda T-Shirt PY-ND004Ukuveliswa kunye neFektri | IPinyang
I-T-shirt yokujikeleza engenanto engenanto engenanto entanyeni
Ingcaciso yeMveliso: Ulwazi lwelaphu le-T-shirt, wazi kangakanani?
1. Yintoni ubunzima begram?
Ubunzima beGram busetyenziselwa ukubonisa ubukhulu belaphu. Ubukhulu bobunzima, ingubo iyajiya. Ubunzima beT-shirt ngokubanzi buphakathi kwe-160g kunye ne-220g. Ukuba icekeceke kakhulu, iya kubonakala elubala. Ukuba ityebile kakhulu, iya kuba sultry. Ngokubanzi, kungcono ukhethe phakathi kwe-180-260g. (imikhono emifutshane idla ngokuba yi-180-220g, ebubungqingqwa obufanelekileyo ukunxitywa. Iikipa ezinemikhono emide zikhetha ilaphu elingu-260g, eliluhlobo olujiyileyo)
2. Yintoni inombolo yesebe?
Inkcazo: ubude beeyadi zomqhaphu onobunzima obuqhelekileyo beponti enye.
Intsimbi yokubala erhabaxa: umsonto ococekileyo womqhaphu one-18 okanye ngaphantsi ukubala, ubukhulu becala usetyenziselwa ukuluka amalaphu ashinyeneyo kunye nobunzima okanye ukuphakamisa nokukhupha amalaphu omqhaphu.
Intambo yokubala ephakathi: 19-29 ubala umsonto womqhaphu. Isetyenziselwa ikakhulu iimpahla ezinithiweyo kunye neemfuno ngokubanzi.
Intambo yokubala entle: 30-60 ukubala umsonto womqhaphu. Isetyenziselwa ikakhulu ukunitha iimpahla ezikumgangatho ophezulu. Ukuphakama kokubala kukuba, ukuthamba kunokuba kunjalo. I-T-shirts zihlala zi-21 kunye ne-32.
3. Yintoni ukudibanisa?
Isikipa somsonto womqhaphu singahlulwa sibe ngumsonto ohlanganisiweyo kunye nomsonto odibeneyo.
Umsonto odityanisiweyo: ubhekisa kumsonto osontwe yinkqubo yokujija edibeneyo, ekwabizwa ngokuba ngumsonto ongadityaniswanga.
Umsonto odityanisiweyo: ubhekisa kumsonto oveliswe ngokongeza inkqubo yokudibanisa kumsonto oqhelekileyo wokukama xa ujikeleza ngombala ophezulu womqhaphu njengempahla eluhlaza. Umphezulu welaphu ucocekile kwaye uthambile.
Yintoni inkqubo yokuprinta i-T-shirt?
Ukuprinta i-T-shirt ukwahlulwe ngokuprinta kwescreen kunye nokudlulisa ukuprinta.
Ukuprintwa kwescreen: itekhnoloji iyinkimbinkimbi, ikakhulu kubandakanya uyilo, ifilimu, ukuprinta, ukomisa amanyathelo aliqela. Izibonelelo zoshicilelo lwesikrini kukukhawuleza kombala, ukuhlala ixesha elide kunye nokuhlala. Ngenxa yexabiso eliphezulu lokwenza iindleko zokushicilela kwesikrini, ukuveliswa kobuninzi kuyafuneka ukunciphisa iindleko, ezingenakho ukuhlangabezana neemfuno zokushicilelwa kwebhetshi enye okanye encinci.
Ukuprinta ukuhambisa: okwaziwa ngokuba kukunyathela okushushu. Izibonelelo ngumbala oqaqambileyo kunye netekhnoloji elula. Ukungancedi kukuba ukuhlala kwepateni kuzinzile, kunganyangeki ukunxiba nokuhlamba.
5. Sitsalwa njani isikipa?
Uphawu lonyango oluhlabayo kukususa i-fuzz eyenziwe kumphezulu womsonto ngenxa yefayibha engenasiphelo kunye nefayibha evelayo, ukuze ilaphu ligudle kwaye lihle, kwaye umbala welaphu ulungile, kwaye unokuprinta iipateni ezicacileyo nezilungileyo.
6. Zeziphi izibonelelo zelaphu lesikipa lekipa? Kutheni usongeza ispandex?
Ilaphu lomqhaphu elicocekileyo libonakala ngesiphatho esihle, ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo, kodwa kulula ukushwabana. Ukongeza isixa esincinci se-spandex kunokuphucula kakhulu iipropathi ezibonakalayo zelaphu, kuyonyusa kakhulu ukomelela kwelaphu, ngelixa ligcina ukuthungwa kunye nentuthuzelo yomqhaphu omsulwa. Ukongeza, ukongeza i-spandex kwi-neckline kunokuthintela i-neckline ekukhululeni nasekukhubazekeni, kunye nokugcina ukuqina okungapheliyo kwe-neckline.
I-T-shirt emfutshane engqukuva engenamikhono emfutshane, umqhaphu ogqibeleleyo, othambileyo, ococekileyo kunye nendalo, akukho zinto ziyingozi, zikhuselekile kwaye zikhululekile. Uyilo lwentamo yeqela labasebenzi, likhululekile kwaye lithambile, linamandla ngakumbi. Iikhofu zefashoni ezilula, umsebenzi ogqibeleleyo, intshukumo yasimahla. Itekhnoloji yesithuthi, uxinizelelo luyaphucuka, kufanelekile. Iinkqubo ezahlukeneyo zokuprinta, iimpahla zomsebenzi ezenziwe ngokwesiko, iimpahla zepati, iimpahla zeklasi, iimpahla zomsebenzi, iimpahla zeqela, iimpahla zomzali nomntwana, njl.
Iitekhnoloji: Iindlela ezishicilelweyo zokuprinta: Ukushicilela kwidijithali
Indawo yokuQala: Jiangxi, China Igama leBrand: IPIN YANG YU
Inombolo yomzekelo: I-PY-WW003 uphawu: Ukulwa nemibimbi, Ukuphefumla, Ubungakanani be-Plus, ezinzileyo
Ikhola: O-Neck Ilaphu Ubunzima: Iigrama ezili-180
Ubungakanani Ekhoyo: 4480 Izinto: 100% yomqhaphu
Uhlobo lweSleeve: Uyilo olufutshane lwemikhono: Ayingenanto, yamkelekile isiko
Uhlobo lwePateni: Shicilela isitayile: Smart Casual
Uhlobo lwengubo: Isampulu yeentsuku ezi-7 zesampulu yoku-odola ixesha: Inkxaso
Ubungakanani: Ubungakanani obuBunjiweyo boLuntu: Yamkela uLuhlu oluCwangcisiweyo
Umkhono: Ukupakisha iLeeve emfutshane: 1pc / Opp Bag
Igama lemveliso: iihempe zamadoda Ixesha lonyaka: Ukunxiba kwehlobo
Ilaphu: 100% yomqhaphu
I-A1: Singumvelisi okwiphondo laseJiangXi, kwaye sineenkampani ezingama-500㎡ eGuangzhou, China.
I-Q2: Asinayo uyilo lwee-tshirts ngoku, ngaba singenza iitshirts?
I-A2: Ewe uqinisekile, i-pls isixelele umbono wakho malunga neehempe, umyili wethu uza kukunceda ugqibezele uyilo.
Q3: Lithini ixesha lakho lokuhambisa?
I-A3: Isampulu ngokubanzi emva kweentsuku ezi-3-7 emva kwentlawulo, ngokwe-odolo eyenziwe ngokwezifiso, ixhomekeke kwiimveliso kunye nobungakanani.
I-Q4: Ngaba ndinokudibanisa noyilo olwahlukileyo?
A4: Ngokuqinisekileyo unako!
Q5: Ithini ipolisi yakho?
I-A5: Kwiisampulu ezenziwe ngokwezifiso, siya kubiza imali yesampulu kodwa siya kuyibuyisa xa i-odolo yesambuku ingaphezulu kweeseti ezili-100
I-Q6: Ngaba ndingafumana ixabiso elisezantsi ukuba ndiya-odola isixa esikhulu?
I-A6: Ewe, amaxabiso atshiphu ngeeodolo ezinkulu kakhulu.
I-Q7: Ungaqinisekisa njani ukuba umgangatho wemveliso?
I-A7: Sijonge ngokungqongqo ngaphambi kokuthumela, siya kuvelisa kwakhona simahla ukuba ngaba yingxaki esemgangathweni kwicala lethu
I-Q8: Ndingayifumana yonke into eyenziwe apha?
A8: Ngokuqinisekileyo ewe; cebisa ngobubele iimfuno zakho ezizodwa, siya kuwenza umsebenzi wenziwe.
Egqithileyo I-T-Shirt e-Round Neck ejikelezayo yamadoda i-PY-NC003
Okulandelayo: I-T-Shirt emfutshane engamadoda emikhono emifutshane PY-ND005
Imibala eQhelekileyo yeCotton Cargo Men Jacket PY -...
Umqhaphu nelinen Retro V-Intamo sleeve elide Men T ...
I-T-Shirt yamadoda e-Long Sleeve yamadoda i-PY-NC002
Iifashoni ezithandwayo zeZip Hoodies Men Jacket PY-MJ005
I-Hip-Hop Graphic Short Sleeve Men T-Shirt PY-ND002
Cotton Zipper Ehlotyeni Amadoda Iblukhwe PY-NK002